ဒူဒူကြီး: Liquid and Solid Continuous Level Measurement နဲ့ Liquid and Gas Continuous Pressure Measurement တို့အတွက် အသုံးပြုလေ့ရှိသော Sensors များ
Liquid and Solid Continuous Level Measurement နဲ့ Liquid and Gas Continuous Pressure Measurement တို့အတွက် အသုံးပြုလေ့ရှိသော Sensors များ
ဦးရီးထွန်း ရေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် http://www.myanmarengineer.org မှ၊ ကူးယူဖော်ပြပါတယ်။
Liquid Continuous Level Measurement - အတွက်၊ Float Type Sensor၊ Gear Type Sensor နဲ့ Tank Gauge Type Sensor တွေကို အသုံးပြုတာတွေ့ဖူးပါတယ်။
Float Type Sensor တွေကို၊ Clean Water, Industrial Water, Waste water, Drinking Water LPG, Chemical, Oil, Acid နဲ့ Solvent တို့ရဲ့၊ Level ကိုတိုင်းတာတဲ့အခါအသုံးပြုပါတယ်။ Level ကို Magnetic Float ရဲ့ movement မှ၊ sense လုပ်နေပြီး၊ Level ပြောင်းတာနဲ့အမျှ၊ Reed Switch တွေရဲ့ Resistance တန်ဘိုးပါလိုက်ပြီးပြောင်းလဲတာမို့၊ ရရှိလာတဲ့ တန်ဘိုးကို Potentiometer သို့ပေးပို့ပြီး၊ Voltage ကနေ 4~20mA Signal အဖြစ်၊ Convert လုပ်ကာ Display Unit မှာဖတ်ယူပါတယ်။
Fig. Liquid Level Measurement တိုင်းတာနည်းအမျိုးမျိုး
Gear Type Sensor တွေကို၊ Clean Water, Industrial Water, Waste water, Drinking Water LPG, Chemical, Oil, Acid နဲ့ Solvent တို့ရဲ့၊ Level ကိုတိုင်းတာတဲ့အခါအသုံးပြုပါတယ်။ Wire ရဲ့တစ်ဖက်မှာ Float ကိုတတ်ဆင်ထားပြီး၊ အခြားတစ်ဖက်ကို Spring Drum မှာတတ်ဆင်ထားပါတယ်။
Level ပြောင်းတာ နဲ့အမျှ၊ Float ဟာ အထက်အောက်ရွှေ့လျားမှုဖြစ်ပေါါလာပြီး၊ Spring Drum မှ တဆင့်၊ Gear mechanism နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Counter ကိုလည်ပတ်စေတာမို့၊ Scale Counter မှာဖတ်ယူနိုင် ပါတယ်။
Tank Gauge Type Sensor တွေရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံဟာ၊ Gear Type Sensor တွေ၊ အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့ တူပြီး၊ အရွယ်အစားပိုမိုကြီးမားကာ၊ Petrochemical Tank, Dams တွေနဲ့ Storage Tank တွေရဲ့ Level ကို တိုင်းတာဖို့အသုံးပြုပါတယ်။
Solid Continuous Level Measurement - အတွက် Capacitance type, Vibration Type နဲ့ Paddle Type Sensor တွေကို အသုံးပြုတာတွေ့ရပါတယ်။
Capacitance Type Sensor တွေကို Liquid သာမက၊ Solid Substance တွေဖြစ်တဲ့ ပလတ်စတိတ် Pellets (PE, PVC, PP, PC), Cement ဘိလပ်မြေ နဲ့ Limestone ထုံးကျောက်တွေရဲ့ Level တွေကို တိုင်းတာတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပါတယ်။ Measuring Electrode ရဲ့ Air လေထဲမှာရှိတဲ့ Capacitance ကို Reference အဖြစ်ယူထားပြီး၊ Level ပြောင်းတာနဲ့အမျှ Electrode ရဲ့ Capacitance တန်ဘိုးလည်း လိုက်ပါပြောင်းလည်းကာ၊ 4~20mA Signal အဖြစ်၊ Convert လုပ်ပြီး Display Unit မှာဖတ်ယူပါတယ်။
Fig. Solid Continuous Level Measurement တိုင်းတာနည်းအမျိုးမျိုး
Vibration Type Sensor တွေကို၊ အများဆုံး Max. 1000 CST လောက် Viscosity ပျစ်တဲ့အရည် Liquid တွေ၊ အနိမ့်ဆုံး 0.01 ~ 0.05 Kg/Cu. mm bulk density လောက်အထိသေးငယ်တဲ့ Granular material နဲ့ Power အမှန့်တွေ၊ Ground Coffee, Milk Powder, Chocolate, Red Iron Oxide, Sugar, Salt နဲ့ Cellulose Powder တွေရဲ့ Level တွေကိုတိုင်းတာတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပါတယ်။ Sensor Rod မှာ Piezo-electric element ထည့်ထားတာမို့၊ Level ပြောင်းတာနဲ့ ဖြစ်ပေါါလာတဲ့ Damping Effect ဟာ Vibration အဖြစ်နဲ့ Electrical Signal ဖြစ်ပေါါစေပါတယ်။
Paddle Type Sensor တွေကို၊ Plastic Pellets တွေ၊ Rice ဆန်၊ Wheat ဂျုံ စတာတွေရဲ့ Level တွေကို တိုင်းတာတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပါတယ်။ Paddle ဟာလည်ပတ်နေပြီး၊ Solid Material နဲ့ထိတွေ့မှသာ၊ Relay ကတစ်ဆင့် Out put Signal ကိုထုတ်ပေးပါတယ်။
Liquid and Gas Continuous Level Measurement - အတွက် Differential Pressure Transmitter Sensor, Pressure Switch Sensor နဲ့ Differential Pressure Switch Sensor များကို၊ Industry Process Control, Chemical Plants, Petrochemical Industry, Heating & Ventilation နဲ့ Ship Building စတဲ့နေရာတွေမှာကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုကြပါတယ်။
Differential Pressure Transmitter Sensor - Pressure Transmitter မှာ Wheatstone (Resistance) Bridge ပါဝင်လေ့ရှိပါတယ်။ Pressure ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ပေါါထွက်လာတဲ့ Deformation of the membrane ဟာ၊ Resistance ကို၊ Proportionally ပြောင်းလဲစေပြီး၊ Wheatstone Bridge မှ၊ Signal ကိုပြောင်းလဲစေပါတယ်။
ရိုးရိုး Point Type Pressure Switch Sensor နဲ့ Differential Pressure Switch Sensor တွေကိုတော့၊ ON/ OFF Switch တွေအဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။
Liquid & Gas Continuous Temperature Measurement - Thermocouple Type Temperature Sensor တွေ၊ PT 100 Type Temperature Sensor တွေ နဲ့Temperature Switch Sensor တွေကို၊ Industry Process Control, Chemical Plants, Petrochemical Industry, Heating & Ventilation နဲ့ Ship Building စတဲ့နေရာတွေမှာကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုကြပါတယ်။
Post credit to : ဦးရီးထွန်း http://www.myanmarengineer.org
ပုံတွေကို Google ကနေရှာဖွေကူးယူပါတယ်။
Posted by ဒူဒူကြီး at 07:27
Scavenging & Scavenge Fire
Plate Type Heat Exchanger (PHE) Cooling System
MARPOL 73/ 78 Regulation Annex I - Oil မှ OWS oily...
Properties of Heavy Fuel Oil
Crane တွေအကြောင်းပြောကျမယ် - Overhead hoist crane
Liquid and Solid Continuous Level Measurement နဲ့ ...
Marine Engine Lubricating System
Purifier အပိုင်း (၂) - Purifier Motor Characterist...
Purifier အပိုင်း (၁) - Centrifugal Construction & ...
Insulation Resistance တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်း
Errors in electrical measurements
Foam installation system
CO2 installation system - အပိုင်း (၂)
CO2 installation system - အပိုင်း (၁)
International shore connection flange
Fire hydrants, fire hoses နဲ့ fire nozzles
Fire main system
Heat detectors နဲ့ Flame detectors
Dual chamber ironization smoke detector
Ionization smoke detectors နဲ့ Americium
Light scattering smoke detector နဲ့ Light obscurin...
Fire detecting system